अब ४० वर्ष उमेर का’टेका एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने ! – Yuwa Aawaj
असार १२, २०७८ शनिबार 960
Prevपत्रकारले समाचार पढ्दा-पढ्दै भने लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीले तलब पाएका छैनौं !
Nextबधाई ! नेमारले तोडे महान पेलेको रेकर्ड !
ग्या’स्ट्रिक,क्या’न्सर लगायत धेरै रोगका लागि उपयोगी सुकमेल, यस्ता छन् अचम्मैको फाइदाहरु !
मेयर हुन त यस्तो आफू चढ्न किनेको गाडी प्रहरीलाई दिएपछि मेयरले भने- मलाई भन्दा प्रहरीलाई गाडीको आवश्यकता छ ।